Sharciga MORE (Sharciga Soo Celinta Fursadaha Marijuana iyo Baabinta) - Codadka Guryaha bisha Sebtember
Sharciga MORE - Fursadda Marijuana, Dib-u-maalgelinta, iyo Faafitaanka
Waa maxay Xeerka DHEERAAD AH?
Xeerka MORE waxaa u codeyn doona Golaha Wakiilada tan September. Waxay calaamadeyn doontaa markii ugu horreysay tan iyo markii la ansixiyay Sharciga Waxyaabaha la Xakameeyay ee 1970, kaas oo lagu meeleeyay xashiish la mid ah hirowiin, in qolqol-fadhiga Congress-ka uu u codeeyay in marijuana laga saaro kala-saaridda walxaha Jadwalka I.
In la xukumo oo laga daayo xashiishadda, si loo siiyo dib-u-maal-galinta dadka qaarkood ee ay saamaynta ku yeelatay Dagaallada Mukhaadaraadka, si loogu bixiyo dembiyada dambiyada xashiishka qaarkood, iyo ujeeddooyin kale.
Maxay noqon doontaa Saamaynta uu ku yeelan doono Sharciga BADAN?
Haddii Sharciga MORE uu si buuxda u dhaqan galo, waxaan lahaan doonnaa dhacdo sharcigu ku ilaalin doono dadka qaba dambiyada marijuana ee heerka hoose ah. Rikoodhadooda dambi ayaa la cadeyn doonaa kiisaskoodana waxaa loo diri doonaa awood kale.
Biilkan ayaa la mideeyay si loo xukumo loona sii daayo xashiishadda noocyo badan oo horey ugu saleysnaa Dagaallada Mukhaadaraadka. Dembiyada xashiishadda qaarkood ayaa loo diri doonaa ka saarid iyo ujeedooyin kale oo biilka ah ayaa saameyn ku yeelan doona nidaamka xukunka guud.
Iyada oo qayb ka ah ficil ka saarida jadwalka maandooriyaha, marijuana iyo tetrahydrocannabinols mar dambe qayb kama noqon doonaan walxaha la xakameynayo. Ka saarista jadwalka ayaa dhici doonta ugu dambeyn 180 maalmood kadib taariikhda la dhaqan-geliyay Xeerkan.
Muxuu Bartilmaameedsanayaa Xeerka DHEERAAD AH?
Ka mamnuucaya marijuana heer federal iyadoo ka saareysa walaxda Sharciga Maadooyinka La Xakameeyay
Waxay ka saartaa marihuana iyo tetrahydrocannabinols jadwalka walxaha la kontoroolo
Waxay ubaahantahay maxkamadaha federaalku inay fasaxaan xiritaanka marijuana iyo xukunada kuwa wali kujira xabsiga ama ay kormeerayaan maxkamad dambiga marijuana.
Waxay u baahan tahay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha si ay si joogto ah u daabacaan xogta dadka ee milkiilayaasha ganacsiga xashiishadda iyo shaqaalaha,
Waxay aasaaseysaa sanduuq aamin ah oo lagu taageerayo barnaamijyada iyo adeegyada shakhsiyaadka iyo ganacsiyada bulshada saameynta ku yeeshay dagaalka daroogada,
Waxay ku soo rogeysaa canshuur 5% alaabooyinka xashiishadda waxayna u baahan tahay dakhli in lagu shubo sanduuqa aaminka,
Waxay siisaa amaahyo Maamulka Ganacsiga Yaryar iyo adeegyo ay heli karaan hay'adaha la xiriira xashiishadda ganacsi sharciyeysan ama adeeg bixiyeyaal,
Waxay mamnuucaysaa diidmada manfacyada bulshada ee federaalka ee qofka iyadoo loo cuskanayo dhaqan ama ciqaab la xiriirta xashiishad gaar ah,
Waxay mamnuucaysaa diidmada faa'iidooyinka iyo ilaalinta ee hoos imanaya sharciyada socdaalka iyadoo lagu saleynayo dhacdo la xiriirta xashiishad
Waxay dejisaa hannaan lagu tirtiro xukunnada laguna fuliyo dhageysiga dib u eegista xukunka ee la xiriira dembiga xashiishadda federaalka
Sidee Xeerka BADAN uu u saameyn doonaa ganacsiyada xashiishka
Sharciga MORE wuxuu u oggolaan doonaa hirgelin dheeri ah si loo xusho qaybaha qayb ka ah ganacsiga xashiishka. Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha ayaa aruurin doona, dayactiri doona, oo sameyn doona xogta dadweynaha ee ku saabsan tirada dadka ee la xiriira shakhsiyaadka milkiilayaasha ganacsiga ku leh warshadaha xashiishka. Isla mar ahaantaana, Xafiiska waxaa ku jiri doona shaqsiyaad ka shaqeeya warshadaha xashiishka.
Xogta guud ee tirakoobka dadka waxaa ku jiri doona:
Shahaadooyinka iyo shatiyada
Xaaladda qoyska iyo guurka
Uruurinta xogta la soo sheegay, hay'adaha sharci dejinta ee rasmiga ah ayaa awood u yeelan doona inay ogaadaan qeybaha ku jira Sharciga ee sida ugu wanaagsan ugu saameyn doona ganacsiga xashiishka. Bixinta xogta noocaas ah ayaa go'aamin doonta sida iyo meesha xeerarka rasmiga ah lagu dabakhi karo.
Sidee ayuu Xeerku u Joojin doonaa Dagaalka Maandooriyaha?
Dagaalkii Maandooriyaha waa olole qaran oo ay hogaamineyso dowladda federaalka Mareykanka. Waxaa ka mid ah mamnuucista daroogada iyo faragelinta militariga ee la doonayo in lagu yareeyo howlaha sharci darrada ah ee qeyb ka ah ganacsiga daroogada ee Mareykanka. Richard Nixon, Madaxweynihii hore, wuxuu ku dhawaaqay muddada 1971 wuxuuna ku dhawaaqay set siyaasadaha daroogada loo sameeyay si loo naaquso wax soo saarka, qeybinta, iyo isticmaalka daroogada.
Iyadoo qayb ka ah Sharciga cusub ee 'MORE', shaqsiyaadka saameyn ku yeeshay Dagaalkii Maandooriyaha waxaa la siin doonaa lacag lagu maareeyo adeegyada daaweynta maandooriyaha. Barnaamijka Deeqda Dib-u-maalgelinta Beesha ee rasmiga ah wuxuu siin doonaa hay'adaha u qalma lacagaha loo baahan yahay. Ereyga 'daaweynta isticmaalka maandooriyaha', waxaan ku aqoonsaneynaa caddeyn ku saleysan, nidaam xirfad leh iyo qorshe qorsheysan oo ka caawiya bukaanada qaba dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha. Diidmada iyo soo kabashada waxaa ku jiri doona qiimeyn dhameystiran, u fiirsasho, iyo kormeer caafimaad.
Ereyga 'u-qalma' macnaheedu waa urur aan faa'iido doon ahayn oo wakiil ka ah beel ama qayb muhiim ah oo bulshada ka mid ah halkaas oo adeegyadu ay heli karaan shakhsiyaadka ay saameeyeen Dagaallada Daroogada. Qeybta 5 ee Xeerka BADAN ee 2019, waxaan ka heli karnaa shuruudaha nidaaminaya xuquuqda shaqsiyaadka isticmaala adeegyada daaweynta.
Qoraalka MORE & PDF
Marabtaa inaad gasho xashiishad
Sidee Sharciga BADAN u Beddelayaa Nolosheena?
Xaaladaha badankood, Dagaalkii Mukhaadaraadka wuxuu ku saleysnaa dembi ka dhigista daroogada. Si kastaba ha noqotee, marka la eego sharciga cusub ee MORE, xaaladdu waa ka duwan tahay sidii hore. Waxaan xaq u leenahay wax ka badan hal xaq oo ah inaan sheeganeyno in qawaaniinta rasmiga ah ay badali doonaan sida aan u aragno xashiishka iyo alaabada xashiishka.
Dagaalkii daroogada wuxuu qeyb ka ahaa taariikhda Mareykanka wuxuuna cawaaqib xumo ku yeeshay bulshadeena. Hadda, waxaan leenahay Xeerka DHEERAADKA ah oo gebi ahaanba beddeli kara ra'yigeenna iyo dhaqankeenna markay tahay soo saarista iyo adeegsiga walxaha nafsaaniga ah.
Iyada oo qayb ka ah MORE Act, waxaa suurtagal ah in dib loo soo celiyo xuquuqda dad badan oo rikoodh dembi ka haysta isticmaalka daroogada iyo qaybinta.
Waxaa loo daayay in la arko inta qof ee fikrad ka duwan ka heli doonta maxkamadda markay tahay dambiyada marijuana ee heerka hoose ah. Hadday taasi dhacdo, dad badan ayaa awoodi doona inay helaan xorriyad iyo diiwaan dambi oo cad oo qayb ka ah hirgelinta Xeerka MORE cusub.
Barnaamijka Deeqda Shatiga Sinaanshaha
Xeerka MORE wuxuu u qoondeeyay Maamulka Ganacsiga Yaryar in la sameeyo oo la fuliyo "Barnaamijka Deeqda Shatiyeysan ee Sinaanta", si loo horumariyo loona hirgeliyo barnaamijyada shatiyeynta xashiishka ee loo siman yahay ee yareeya caqabadaha haysta shatiga xashiishadda iyo shaqaalaynta shakhsiyaadka sida xun u saameeyay Dagaallada Mukhaadaraadka, oo ay ka mid yihiin:
Ka dhaafida khidmadaha dalabka shaqsiyaadka dakhligoodu ka hooseeyo boqolkiiba 250 ee Heerka Saboolnimada Federaalka ugu yaraan 5 10kii sano ee la soo dhaafay kuwaas oo markii ugu horeysay codsadayaal ah.
Mamnuucida diidmada shatiga xashiishka oo ku saleysan xukun dembi xashiishad ah oo dhacay ka hor sharciyeynta gobolka ee xashiishadda ama taariikhda dhaqangelinta sharcigan, sida ugu habboon.
Mamnuucida xadidaada xukun ciqaabeed ee ruqsad siinta marka laga reebo xukun ku saabsan lahaanshaha iyo ku shaqeynta meherad.
Mamnuucida dadka haysta liisanka xashiishadda ee ku howlan baaritaanka daroogada xashiishka ee shakiga leh ee shaqaalahooda mustaqbalka ama kuwa hadda jira, marka laga reebo baaritaanka daroogada ee boosaska xasaasiga ah, sida lagu qeexay Sharciga Imtixaanka Gaadiidka Omnibus ee 1991.
Abuuritaanka guddi shatiyeynta xashiishadda oo ka tarjumeysa isirka, jinsiyadda, dhaqaalaha, iyo jinsiga ka kooban Gobolka ama deegaanka, si ay ugu adeegto sidii guddiga kormeerka ee barnaamijka shatiyeynta loo siman yahay.
Jadwalka Ee Ficil BADAN
Bishii Luulyo 23rd, 2019 ayaa la soo saaray biilka.
Waxaa lagu ansixiyay Guddiga Garsoorka bishii Noofambar, 20keeda, 2019 iyadoo cod loo qaaday 24/10
Guddiga Ganacsiga Yaryar wuxuu ku dhawaaqay tanaasulid biilka Janaayo 5th, 2020.
Bishii Janaayo 15-keedii, dhageysi sharci-dejin ah oo ku saabsan Guddiga Tamarta iyo Ganacsiga ayaa la qabtay.
28-kii Ogosto, waxay ahayd sidaana in Goluhu isu diyaarinayo cod buuxa oo dabaq ah oo ku saabsan Xeerka DHEERAADKA bisha Sebtember.
Isbahaysiga Cadaaladda ee Marijuana Ka shaqee ficil dheeri ah
Isbahaysiga Cadaaladda ee Marijuana waa isbahaysi ballaadhan oo ka kooban 15 ururro aan faa'iido doon ahayn iyo u doodis qaran, oo la aasaasay 2018, kuwaas oo ku biiray xoogagga u doodaya dib-u-habeynta marijuana ee federaalka iyada oo loo marayo muraayad caddaalad midab iyo dhaqaale.
Shaqada Isbahaysiga Cadaalada ee Marijuana ee ku saabsan hordhaca iyo marinka sharciga MORE wuxuu aasaas u ahaa. Dhawaan waxay curiyeen a warqad wadajir ah xubnaha Koongareeska weydiisanaya inay taageeraan Marijuana Fursadda Dib-u-maalgelinta & Baahinta.
Qeybtan ka mid ah Warka Sharciyeynta Cannabis waxaan fursad u helnay inaan ku marti galno, maqal waxay nooga sheegeen sharciga MORE iyo isbahaysigooda.
Raadi wakiilkaaga oo waydii meesha ay ka taagan yihiin Xeerka MORE.